Speed ​​Dreams, lalao hazakazaka hita ao amin'ny Flathub | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Speed ​​Dreams isika. Momba ny a Lalao hazakazaka 3d loharano misokatra ary maimaim-poana izay ho hitantsika misy ao amin'ny Flathub. Hanamora kokoa antsika ny fametrahana Ubuntu io.
Izany dia hazakazaka simulator fifaninanana fiara Torcs. Izy io dia mikendry ny hampiditra endri-javatra vaovao mampientam-po, fiara, lalamby ary mpanohitra AI hahatonga ny lalao ho mahafinaritra kokoa ho an'ny mpilalao. Ny lalao simulation racing dia hanome antsika fihetsika mitondra fiara mazava tsara, misy motera fizika maro azo ampiasaina.
Es mifanaraka amin'ny fitaovana ampidirina toy ny kitendry sy totozy, fifaliana, fifaliana, kodiarana ary pedal. Noho ny fitondran-tenany mitondra fiara sy ny fizika, ny lalao dia mety ho sarotra ny milalao amin'ny klavie sy totozy, indrindra ho an'ireo mpilalao vao vao.
Na dia tsy milaza betsaka momba ny lalao aza ny tranonkala Speed ​​Dreams, dia Wikipedia misy fampahalalana marobe momba izany. Ka raha te hahalala bebe kokoa momba ity lalao ity ianao dia zahao. Tokony holazaina ihany koa fa ny pejy Wikipedia dia tsy misy fanovana vao tsy ela akory izay. Misy pejy wiki avy amin'ny Speed ​​Dreams ao Sourceforge ahafahantsika mahazo fampahalalana bebe kokoa.
Tsy misy binary Dreams Speed ​​an'ny Gnu / Linux azo alaina. Noho io antony io, ireo mpampiasa Gnu / Linux dia niantehitra tamin'ny toeram-pivarotana antoko fahatelo hametraka ny lalao hatreto. Ohatra, amin'ny Ubuntu, ny lalao dia azo apetraka amin'ny PPA na PlayDeb. Na izany aza, ny PPA dia tsy nohavaozina hatramin'ny 2012, raha toa kosa nilaozana ny PlayDeb. Saingy misaotra an'i Flathub, mpampiasa an'ity sehatra ity, afaka izahay izao mametraka mora foana ny Speed ​​Dreams version 2.2.2 RC2 ao amin'ny Ubuntu, navoaka tamin'ny martsa 2018.
1 Toetra mampiavaka ny Speed ​​Dreams
2 Ampidiro Speed ​​Dreams amin'ny Ubuntu
Toetra mampiavaka ny Speed ​​Dreams
Familiana marina. fampiasana motera fizika samihafa.
Azo lalaovina amin'ny hafa fitaovana fampidirana.
Hanana ny fahafaha-mampiasa isika fomba hazakazaka maro samihafa. Manomboka amin'ny fivoriana fanazaran-tena tsotra ka hatrany amin'ny hazakazaka mpanamory fiaramanidina feno.
Ahitana marobe ny lalao maodely hazakazaka azo namboarina. Ireo dia hanandrana hamerina karazana hazakazaka tena izy, ao anatin'izany ny hetsika sarotra toy ny fiadiana ny tompondaka na ny hazakazaka fiaretana.
Ao amin'ny lalao, hahita zavatra tsara isika karazana fiara na kilasy fiara (Grand Prix 1936, Supercars, Long Day Series GT1, sns.).
Hahita zavatra tsara ihany koa isika karazana làlana na sokajin'ny làlana.
ny toetrandro afaka ampanjifainay izy ireo. Ny dome an'ny lanitra dia azo alamina ho toy ny mavitrika, izany hoe manahaka ny fifandimbiasan'ny andro sy ny alina ary ny fivezivezena ireo zavatra eny amin'ny lanitra. Ny fanahafana ny toetrandro dia misy fiatraikany amin'ny fizika, izay misy fanitsiana mifanaraka amin'izany dia hisy fiantraikany amin'ny fihazonan'ny fiara. Mety hisy fiatraikany amin'ny sary koa izy io, miaraka amin'ireo sosona rahona mihetsiketsika ary, raha ilaina, dia potipotika orana 2D.
Ho vitantsika mifaninana amin'ireo botika AI isan-karazany samy hafa.
Ity lalao ity dia hanome antsika ny mety milalao hatramin'ny mpampiasa 4 amin'ny maody multiplayer eo an-toerana, miaraka amin'ny «écran split». Mandritra ny hazakazaka, ny faritra dia azo foronina amin'ny fomba mavitrika, hamafana ary handamina amina endrika maromaro. Speed ​​Dreams dia manohana mpilalao 4 mifaninana miaraka amin'ny hazakazaka iray, mampiasa fitaovana mitovy, ary koa lalao an-tserasera.
Ampidiro Speed ​​Dreams amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny Gnu / Linux, tsy mila araho ny fanomanana haingana flatpak, ao anatin'izany ny fanampiana ny repository ilaina hahafahana mampiasa azy ao amin'ny rafitra Ubuntu. Avy eo dia mila fotsiny isika mitsidika ny Pejy Speed ​​Dreams Flathub ary tsindrio ny bokotra hametraka. Izany dia hiteraka fisintomana ny fisie ilaina mba hahafahantsika manokatra amin'ny fametrahana rindrambaiko.
Ho afaka ihany koa isika mikaroha safidy Speed ​​Dreams ao amin'ny rindrambaiko Ubuntu. Alohan'ny tsy maintsy ampidirintsika ny tahiry Flathub.
Raha nanampy ny tahiry Flatpak izahay dia safidy hafa amin'ny fametrahana ny lalao no soraty amin'ny terminal ity baiko ity (Ctrl + Alt + T):
Para fampahalalana bebe kokoa momba ity lalao ity, afaka manatona ny tranokalan'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Speed ​​Dreams, lalao hazakazaka hita ao amin'ny Flathub
Ekipa fampandrosoana haingana nofinofy dia hoy izy:
Salama. Voalohany indrindra dia misaotra indrindra tamin'ny lahatsoratrao sy tamin'ny fampiroboroboana ny lalaontsika. Tianay ny hilaza aminao fa amin'izao fotoana izao, ankoatra ny fametrahana amin'ny alàlan'ny Flatpak, dia azo atao ny milalao Speed ​​​​Dreams amin'ny AppImage, ary misy ihany koa ny PPA ho an'ny fametrahana amin'ny Ubuntu sy ny derivatives. Azonao atao ny manamarina ireto safidy ireto ao amin'ny fizarana "Downloads" amin'ny tranokalanay vaovao:
Valio ny Ekipa Fampandrosoana Speed ​​​​Dreams
Ahoana ny fametrahana Docker amin'ny Ubuntu 18.10 sy ny derivatives?
Ahoana ny fametrahana Audacity amin'ny Ubuntu 18.10 sy ny derivatives?